Shirka Wadatashiga Dowlad Goboleedyada oo maanta ka furmaya Dhuusamareeb | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Shirka Wadatashiga Dowlad Goboleedyada oo maanta ka furmaya Dhuusamareeb
Shirka Wadatashiga Dowlad Goboleedyada ayaa maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeb, iyadoo ay socoto qaban qaabadii u dambeysay ee uu shirka ku furmayo, kaddib markii ay soo idlaaday howlihii farsamo ee la xiriiray diyaarinta shirka.
Shirkan ayaa noqonaya kii u horreeyay ee Maamul goboleedyada oo kaliya dhex mara, tan iyo markii uu burburay Golihii Iskaashiga dowlad goboleedyada, isla markaana ay meesha ka baxeen saddex ka mid ah Madaxdii dowlad goboleedyada ee ku mideysnaa Golahaas.
Inkastoo shalay aheyd Jimco maalin nasasho ah, hadana waxaa jiray kulamo gaar gaar ah oo ay lahaayeen Madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo Madaxweynaha Galmudug Axmed Qoorqoor uu qado sharaf u sameeyay Madaxda Dowlad goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Koofur Galbeed iyo Jubbaland.
Halku dhigga shirka ayaa ah Shirka Wadatashiga Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ajandaha shirka maanta ayaa kaliya ah furitaanka khudbadaha Madaxda dowlad goboleedyada, kadibna waxaa loo guda geli doonaa shirar ay albaabada u xiran yihiin oo ay si gaar gaar ah iyo si guudba ay u yeelanayana wafuuda ay hoggaaminayaan Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Guddiyo Farsamo ay iska magacaabeen shanta maamul goboleed.
Waxaa isha lagu hayaa shirka maanta furmaya oo dhammaan dhinacyada siyaasadda daneeya iyo dalalka taageera Soomaaliya ay si gooni ah u eegayaan waxa ka soo bixi doona, yadoo qorshuhu yahay in shirku qaato muddo saddex cisho, gabagabadana laga soo saaro war murtiyeed.
Shirkan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah oo dalku galay kala guur siyaasadeed oo aanay kala caddeyn halka geeddigu ku furan doono, iyadoo muran badan uu ka jiro hannaanka doorasho ee dalku aadayo oo aanay jirin cid heshiis ku ah.
Inta badan waxaa uu shirka diiradda saarayaa arrimaha doorashooyinka, dib u eegista dastuurka iyo xeerarka doorasho ee ay meel mariyeen Baarlamaanka, kaasoo ay inta badan maamul goboleedyada diidan yihiin qaabka loo maray ansixintooda.
Ammaanka magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo waddooyinka la dhigay ciidamo aad u fara badan, kuwaasoo ka qeyb qaadnaaya sugida amniga madaxda Dowlad goboleedyada iyo shirka ka furmaya magaalada.
Previous articleWasaarada Waxbarashada oo maanta qaadaysa imtixanka fasalada 8aad
Next articleFaahfaahin ka soo baxaysa dagaal ka dhacay magaalada Gaalkacyo